HR လားဟေ့ဝင်ခဲ့လေကွယ် ( ၅၄ ) | MMiN
HR လားဟေ့ဝင်ခဲ့လေကွယ် ( ၅၄ )
Outsourcing of Training
ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းအများစုဟာ Training ပေးဖို့အတွက်ပြင်ပကနေ Training ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အကြံပေးတွေကိုအသုံးပြုကြတာများပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက Outsourcing of Training ကိုအ သုံးပြုမှုဟာ သိသိသာသာများမလာတာပါ။ အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ ကုန်ကျစရိတ်များတာရယ်၊ ပြုလုပ်ပေး လိုက်တဲ့ Training နဲ့မိမိအဖွဲ့အစည်းရဲ့ Strategies တွေနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိစေဖို့ရယ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေ မယ့်လည်း ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့တစ်ခု Merge လုပ်တဲ့အချိန်တွေ၊ ဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီတစ် ခု ကို ဝယ်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့မဖြစ်မနေအသုံးပြုကြပါတယ်။ ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုက တော့ ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို ကုန်စည် ဒါမှမဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရောင်းချတဲ့သူတွေဆီကနေပြီး သင်တန်းပေးစေ တာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် – ကျွန်တော်တို့ Software တစ်ခုခုကိုဝယ်ယူအသုံးပြုလိုက်ပြီဆိုရင် အဲဒီ Software အသုံးပြုပုံပြုနည်းကို Software ရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကပဲ ပြန်လည်သင်ကြားပေးတာမျိုးပါ။ တခါတ လေကျတော့လဲ အဲဒီလိုသင်ကြားပေးလိုက်ပြီး အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးလိုက်တာမျိုးဟာ ဝန်ထမ်းတွေကို အလုပ်ပြောင်းနိုင်အောင် လက်မှတ်တစ်ခုထုတ်ပေးလိုက်သလိုလဲဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအသိအမှတ်ပြု လက် မှတ်တွေ ထုတ်ပေးတာဟာ အလုပ်ရှင်တွေအတွက်လဲ ကောင်းကျိုးဖြစ်စေတာတွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ – ကုမ္ပဏီတစ် ခုက စာရင်းကိုင်တွေခေါ်တဲ့အခါမှာ သက်ဆိုင်ရာဘွဲ့တစ်ခုအပြင် LCCI လိုလက်မှတ်မျိုးရှိရမယ်၊ ဒါမှမဟုတ်လဲ CPA ဖြစ်ရမယ်စသဖြင့်အရည်အချင်းသတ်မှတ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။
တချို့ Suppliers တွေကျတော့လဲ သုံးစွဲသူများဆိုင်ရာညီလာခံလိုမျိုးကျင်းပပြီး မိမိတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း သုံးစွဲတဲ့ကုမ္ပဏီက ဝန်ထမ်းတွေကိုခေါ်ယူပြီး သူတို့မသိသေးတဲ့၊ သိဖို့လိုအပ်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေ၊ ဝန်ဆောင်မှု တွေ၊ အချက်အလက်တွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတာမျိုးလဲပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
Government-Supported Job Training
တော်တော်များများနိုင်ငံတွေမှာတော့ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေ ကလဲ Training နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အထောက်အပံ့တွေပေးတာမျိုးတွေ၊ ငွေကြေးကူညီပေးတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ အ မေရိကန်လိုနိုင်ငံမှာဆိုရင် Quick Start (Georgia), Smart Jobs (Texas), and Partnership (Alabama) အစီ အစဉ်တွေဟာ လူသိများတဲ့ Training Support Efforts တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ထမ်းတွေကိုခေါ်ယူခန့်ထားရာမှာ၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရာမှာ နိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ အချက်အ လက်တွေ၊ စည်းကမ်းတွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေဟာ နိုင်ငံတော်က ထောက်ပံ့တဲ့ ငွေကိုခံစားခွင့် ရရှိကြမယ့်သတ်မှတ်ချက်မျိုးတွေချမှတ်ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
အချို့သော လုပ်ငန်းရှင်တွေက သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို ပညာသင်ကြားဖို့အတွက်အကူအညီအထောက် အပံ့တွေပေးတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ တချို့ဆိုရင်ဝန်ထမ်းတွေ ကောလိပ်တက်ဖို့အတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးပြီး ကျောင်းပြီးလို့အလုပ်ဝင်တဲ့အခါကျမှသာ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ ဆိုရင် အဲဒီလိုမျိုးသင်တန်းတက်ဖို့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို ကြိုတင်ထုတ်ပေးထားပြီး သင်တန်းပြီးတဲ့အခါ မှာ သင်ယူလာတဲ့ပညာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အလုပ်တာဝန်ပေးပါတယ်။ ပြီးလို့ ရာထူးအမြင့်ပိုင်းရောက်ပြီး လစာများများ ရပြီဆိုမှ စိုက်ထုတ်ပေးထားတဲ့ ငွေကြေးကိုအရစ်ကျပြန်လည်ဖြတ်တောက်တာမျိုးလဲ တွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ရှားတော့ ရှားပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး စိုက်ထုတ်ပေးထားတဲ့ပမာဏကို အစိုးရကအခွန်မကောက်ပဲထားဖို့ သတ်မှတ်ပေးထား တာမျိုးနဲ့လည်း ဝန်ထမ်းတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့နေရာမှာအားပေးဖို့အတွက် စီစဉ်တာမျိုးလည်းရှိပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် အစဉ်အဆက်ကျင့်သုံးခဲ့ကြတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအရ ပညာသင်ကြားပေးတဲ့အခါ လုပ်ငန်း ရှင်ဘက်ကဆုံးရှုံးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ ကျောင်းပြီးလို့ဘွဲ့ရသွားတဲ့ခါကျရင် ဝန်ထမ်းက အခြားအလုပ်တခု ခုကို ဒါမှမဟုတ် ဝင်ငွေပိုရမယ့်အလုပ်တစ်ခုခုကိုပြောင်းရွှေ့သွားတတ်ကြတာမျိုး လည်းကြုံရနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်း ရှင်တွေအနေနဲ့အဲဒီလိုဝန်ထမ်းတွေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့လဲ အစီအမံတွေ ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားကြရ မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုတွေ့နေရတာကတော့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကလဲ ကိုယ်ကလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီးမှ အခြားအလုပ် တစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ကြတဲ့အခါမှာ သင်ကြားပေးထားတဲ့စရိတ်စကတွေဆုံးရှုံးတယ်လို့ယူဆပြီး ဝန်ထမ်းတွေကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးဖို့စိတ်မပါကြတော့ပါဘူး။ ဝန်ထမ်းတွေဘက်ကကျတော့လဲ သင်တန်းတွေကိုအပင်ပန်းခံ တက်ပြီး ပညာတွေတတ်မြောက်လာတဲ့အခါ တတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့ရတဲ့လခနဲ့ မကိုက်ညီဖူးလို့ယူဆပြီး ပိုပေးတဲ့ ဆီကိုပြောင်းကြပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်ဘက်ကကျတော့လဲ သင်ကြားရေးစရိတ်တွေအကုန်အကျခံသင်ပေးပြီး လစာ လဲတိုးပေးရဦးမယ်ဆိုရင်မတန်ဖူးလို့ စဉ်းစားကြပါတယ်။ တကယ်တော့ဖြစ်သင့်တာက ၀န်ထမ်းတွေကိုလိုအပ် တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေရရှိလာဖို့အတွက် သင်စရာရှိတာသင်ပေးပြီး ပညာတွေပိုပြီးတတ်မြောက်လာကြတဲ့အခါ အရင် ကထက်ပိုပြီး Productivity တက်လာတဲ့အတွက် ကုမ္ပဏီကို အကျိုးပြုလာနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် သင့်တင့် လျောက်ပတ်တဲ့ လစာနဲ့ခံစားခွင့်တွေကိုတိုးမြှင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ဖြင့် အရည်အသွေးပြည့်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကိုရရှိ ထ်ိန်းသိမ်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နို့မို့ရင်တော့ ဆုံးရှုံးမှာကြောက်လို့ သင်မပေးတဲ့အခါမှာ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကျွမ်း ကျင်မှု အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျတဲ့အတွက် ကုမ္ပဏီရဲ့ Productivity မ ကောင်းရင်လဲဆုံးရှုံးမှာပဲမဟုတ်ပါလား။
Choice of Training Methods
Training တစ်ခုကို ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာပဲပေးပေး၊ ပြင်ပကနေပြီးခေါ်ပြီးတော့ပဲပေးပေး၊ သင့် တော်မယ့် Training Method ကိုတော့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Training မှာပါဝင်မယ့်အချက်တွေကလဲ Training Objectives နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ Training Objectives ရဲ့ဆက်စပ်မှုရှိမှသာလျှင် အသုံးပြုလိုက်တဲ့ ငွေကြေးဟာ အကျိုးရှိရှိအသုံးပြုတာဖြစ်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် Training Contents နဲ့ Objectives တွေအတတ်နိုင်ဆုံး နီးစပ်မှလဲ Trainee တွေရဲ့ သင်ယူလေ့လာနိုင်စွမ်းကိုအထောက်အကူပြုသလို့ အကျိုးရှိတဲ့ Training တစ်ခုဖြစ် လာမှာသေချာပါတယ်။ Training Program တစ်ခုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေ၊ ပါဝင်ရမယ့်အချက်တွေကို ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့ အခါမှာ Training ကိုစီစဉ်တဲ့သူအနေနဲ့ စတင်အကောင်အထည်ဖော်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Training တခုကိုအ ကောင်အထည်ဖော်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ Training Methods တွေကတော့ ဇယားမှာဖော်ပြထားသလိုပဲ Presentation, Hands-on Methods, Group-Building Methods စသဖြင့် အမျိုးအစားတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
Training Program တစ်ခုဟာအပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့နည်းလမ်းအားလုံးကိုတစ်ခုချင်း ဒါမှမဟုတ်လဲ ပေါင်း စပ်ပြီး အသုံးပြုသွားနိုင်ပါတယ်။ သာမန်အားဖြင့်တော့ အသုံးပြုလိုက်တဲ့ Methods တစ်ခုဟာ Course Content နဲ့ သင်တန်းသားတွေရဲ့ သင်ယူနိုင်စွမ်းနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Training တစ်ခုကိုဌာနတွင်းပဲ လုပ်လုပ်၊ ပြင်ပမှာပါလုပ်လုပ် သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ Training ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
Training တစ်ခုပြုလုပ်ဖို့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ပုံမှာဆိုရင် Training methods တွေဖြစ်တဲ့ instructor-led classrooms, online self-study, virtual classrooms, and other methods, including workbooks and videos တစ်ခုချင်းစီရဲ့ Training ပေးတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ အချိန်တွေကိုတွေ့ရမှာပါ။
SOURCE: “Training 2009 Industry Report,” Training, November/December 2009, pp. 32–36.
အဲဒီ workbooks and videos တွေကိုအသုံးပြုမှုတွေဟာ ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီး Training ပြုလုပ်လာနိုင်တာနဲ့အမျှ တဖြည်းဖြည်းအသုံးပြုမှုနည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ပိုင်းကာလ တွေမှာဆိုရင် Training Program တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ Virtual စနစ် ဒါမှမဟုတ် Face to Face classroom ဒါမှမဟုတ်ရင် Instructor-led ဆိုတဲ့သင်ကြားပေးသူက နည်းပညာကိုအခြေခံပြီး သင်ကြားပေးတဲ့စနစ်ကိုပြောင်း သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
← HR လားဟေ့ဝင်ခဲ့လေကွယ် ( ၅၃ )
HR လားဟေ့ဝင်ခဲ့လေကွယ် ( ၅၅ ) →